लोक सेवा आयोग तयारी सम्बन्धि १० वेबसाइट – लाेक सेवा तयारी
Home » शाखा अधिकृत » लोक सेवा आयोग तयारी सम्बन्धि १० वेबसाइट
June 25, 2020 May 23, 2021 Debendra Subedi
लोक सेवा आयोग तयारी सम्बन्धि पाठयसामाग्रि मा अाधारित केहि वेवसाइटहरू हामिले प्रस्तुत गरेका छाै। लोकसेवा आयोग तयारी का लागि विद्यार्थिहरूलाइ उपर्युक्त हुने १० नेपालि वेवसाइट प्रस्तुत छन।
नेपालकाे लोक सेवा आयोग काे स्थापना बाटै सार्वजनिक प्रशासन याेग्यता प्रणाली संस्थागत हुन पुगेकाे हाे। नेपालकाे संविधान तथा निजामति सेवा एेन २०४९ अनुरूप लोक सेवा आयोगले सार्वजनिक प्रशासनमा स्थायि कर्मचारीहरूकाे भर्ना परीक्षा संचालन गर्दछ।
हामिले नेपाल मा उपलब्ध नेपालि द्वारा संचालित दश (१०) आयोग तयारी सम्बन्धि वेवसाइटहरूकाे लिष्ट तयार गरेका छाै। हाम्राे याे लाेकसेवा तयारी वेवसाइट अाफैमा आयोग तयारीमा अाधारित वेवसाइट भएता पनि विद्यार्थीहरूकाे सहयाेगका लागि अन्य वेवसाइटहरूकाे परिचय प्रस्तुत छ।
लोक सेवा आयोग तयारी सम्बन्धि वेवसाइटहरू
लाेक सेवा गाइड डट कम
लाेक सेवा नेपाल.कम
Career Counseling Center Pvt. Ltd. द्वारा संचालित लाेक सेवा गाइट डट कम एक प्रिमियम लाेक सेवा तयारी सम्बन्धि वेवसाइट हाे। यस्ले लाेक सेवा तयारीका निमित्त अायाेग द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रमका शिर्षकहरूमाथि छुट्टा टुट्टै लिंक खडा गरि अाफ्नाे पाठयसामाग्रिहरू बेचिरहेकाे छ। यस वेवसाइटमा अध्ययन सामाग्रिहरू Esewa र Khalti बाट सहजै किन्न सकिने व्यवस्था छ।
याे वेवसाइटकाे शाखा अधिकृत तर्फकाे प्रथम पत्रकाे Practice Set हरू अन्य जुनसुकै वेवसाइट तथा लाेकसेवा पढाउने इन्सिच्युट भन्दा अब्बल र पाठयक्रम संगत छन । प्रत्येक सेटका Answer Key हरूका कारण अझ प्रभावकारी हुन गएकाे छ।
Loksewa MCQ ले लोक सेवा आयोग तयारी का लागि अाफुलाइ English Version मा तयार पारेकाे छ । शाखा अधिकृतकाे खास गरि द्धितीय पत्र र तृतीय पत्र सम्बन्धि विषयवस्तुकाे महत्वपुर्ण र किफायति जानकारीकाे लागि तपाँइ Loksewa MCQ समक्ष पुग्नै पर्ने हुन सक्छ।
शिर्षकगत रूपमा पाठ्यक्रम अनुरूप अत्यावश्यकीय जानकारिले भरीएकाे लेखनशिप केन्द्रित पढाइका लागि Loksewa MCQ ज्यादै उपयाेगि छ। विद्यार्थिहरूले अध्ययन सामाग्रिका लागि कुनै शुल्क बुझाउनु नपर्ने हुनाले समेत याे वेवसाइट लोकसेवा आयोग तयारीकाे लागि महत्वपुर्ण स्राेत साबित हुन्छ।
सार्वजनिक प्रशासनका गतिविधिमा अाधारित Online Portal प्रशासन.कम लाेक सेवा सम्बन्धि नविनतम गतिवधि, सार्वजनिक व्यवस्थापनका अाधुनिक सवालहरू तथा अग्रज कर्मचारीका लेख तथा विचारहरूले भरिपुर्ण छ।
यस्ले लाेक सेवा तयारी लागि छुट्टै क्याटागाेरि खडा गरेर वस्तुगत तथा विषयगत अध्ययनका विविध सामाग्रिहरू प्रदान गरिरहेकाे छ। प्रशासन.कम विशेषत विषयगत अध्ययन र लेखनशिपकाे तयारीका लागि महत्वपुर्ण हुनसक्छ।
प्रशासन.कम जस्तै तर पृथक अर्काे वेवसाइट निजामती खबरका नाममा उपलब्ध छ। यस्ले सार्वजनिक प्रशासनका दिन दैनिकि खबरहरू, सार्वजनिक सेवाका सकारात्मक कार्यहरू तथा निजामति सेवा सम्बन्धि विविध प्रश्नहरूकाे समाधान प्रस्तुत गरेकाे छ। जस्ले तपाँइ लाइ लोक सेवा आयोग तयारी सम्पन्न गराउन निक्कै सहयाेगि भुमिका खेल्न सक्छ।
मन्त्रालय, विभाग देखि कार्यालय सम्म तथा अन्य सार्वजनिक निकायका निकायगत गतिविधिलाइ निजामति खबरले सबैभन्दा उत्कृष्ट तरिकाले समेटेकाे छ।
एन्ड्राेइड एप्लिकेसनकाे रूपमा प्ले स्टाेरमा प्रख्यात रहेकाे लाेक सेवा आयोग तयारी सम्बन्धि याे एप्लिकेसनकाे Online पाठयसामाग्रिहरू पनि उपलब्ध छन । वस्तुगत अध्ययन का लागि नेपालमा उपलब्ध अन्य सबै Internet Base Resources मा लाेकसेवा नेपाल. कम नै सबैभन्दा उत्कृष्ट लोकसेवा आयोग तयारी गन्तब्य हाे ।
नयाँ पत्रिका दैनिकः नेपालि राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका नयाँ पत्रिका दैनिक काे लाेक सेवा विशेषांक पनि लोकसेवा आयोग तयारीकाे लागि महत्वपुर्ण छ। यस्ले पाठक/विद्यार्थिका प्रश्नमा अाधारित अंकहरू प्रकाशन गरेकाे छ। उत्त अंकका सामाग्रिहरू अनलाइनमा उपलब्ध छन।
नागरिक न्युजः सबैभन्दा ज्यादा विक्रिहुने मध्धेकाे एक नागरिक दैनिक ले पनि विद्यार्थीहरूकाे सहयाेगका लागि लाेक सेवा पाठयक्रममा अाधारीत रहि लाेकसेवा अकं प्रकाशन गरिरहेकाे छ।
लोक सेवा आयोग तयारी सम्बन्धि अझै धेरै वेव पेजहरू इन्टरनेटमा प्राप्त छन । हामि तिनिहरूलाइ पनि क्रमश समेट्दै जानेछाै। लोक सेवा आयोग तयारी कक्षा हरूकाे सम्बन्धमा हाम्राे अर्काे पाेष्टकाे प्रतिक्षा गर्नुहाेला।
2 thoughts on “लोक सेवा आयोग तयारी सम्बन्धि १० वेबसाइट”
Pingback:नेपालकाे बजेट २०७७/७८ का तथ्यहरू – लाेक सेवा तयारी
Pingback:लाेकसेवा तयारी लाइ सघाउने महत्वपुर्ण किताबहरू